Khin Maung Chin: ဘလော့ဂါဆိုသည်မှာ ?(Tag Post)
ဒါပေသိ မတီးမမြည်၊မရေးမပြီး ဆိုသလိုဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းပဲ ကိုယ့်ဆန္ဒ့အရလိုလိုလားလား
ကြိုတင်ပြောထားချင်တာက ကျနော်ငချွတ်လေးဟာ ရိုးရိုးသာမန်ငချွတ်လေးသာဖြစ်ပါကြောင်း၊
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာစကားဝှက်တွေနဲ့စတတ်နောက်တတ်တဲ့နည်းပညာရှင်ချစ်ကိုကြီး ကိုမောင်(SSK)၊ ကျနော့်ကိုအမြဲစာနာအားပေးတတ်သူညီမငယ် ချိုချဉ်၊
လွမ်းဖော်လွမ်းဖက်လာလာညှိတတ်တဲ့ မမအိန်ဂျယ်လ် နဲ့ထမင်းဟင်းချက်ဖို့အိမ်ရှင်မ
ရှာပေးချင်လွန်းတဲ့ မမဂျပ်စ်မင်း၊ နောက်ပြီးချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ကဗျာဆရာ ကိုပဥာက် တို့အားလုံးကခင်ခင်မင်မင်နဲ့ ဘလော့ဂါဆိုတာဘာလဲ? ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးပေးဖို့ခိုင်းစေလာခဲ့ကြပါတယ်။
တယ်။ရှာဖွေလေ့လာတယ်ပြောလိုက်လို့ ''တယ်ဟုတ်ပါလားလို့'' အတွေးမစောလိုက်ပါနဲ့ဦးခင်ဗျာ။
ဂုရုကြီး ဆီမှာသွားရှာတာမဟုတ်ရကြောင်းပါ။ ဧကန်စစ်စစ်အစ်ကိုအစ်မ၊ညီညီမတွေနဲ့အန်တီအန်ကယ်တို့ရေးထားခဲ့သမျှပို့စ်တွေကို ဒီမှာ လိုက်လံဖတ်ရှု့ခဲ့ရတာ
အစ်ကိုငွေလမင်း ရဲ့ပို့စ်မှာ If you don’t ask me, I know. But if you ask me I don’t know. ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုဂရုပြုမိသွားတာကိုစပြောရမှာပေါ့ဗျာ..။ မှန်ပါတယ်ဗျာ.....သိသလိုလိုနေခဲ့ပြီးမှ(သိလည်းသိခဲ့တယ်လို့လက်ခံယုံကြည်ထားပြီးမှ)တကယ်
အစ်မရွှေစင်ဦး ရဲ့ပို့စ်မှာဘလော့ဂါဆိုတာ ''မိမိတို့လက်လှမ်းမှီသမျှပတ်ဝန်းကျင်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုလည်းအမှန်
နောက်ပြီးတော့ ''တချို့ဘလော့ဂ်ဂါများကတော့ကိုယ်လက်ခံတဲ့အယူအဆတွေ၊နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်၊ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းကြပါတယ်။ အယူအဆခြင်းမတူရင်ငြိမ်းချမ်းစွာသဘောထားမကွဲလွဲပဲနဲ့ဆဲကြဆိုကြတဲ့အခါမှာတော့ဘလောဂ်
မမအိန်ဂျယ်လ် ကတော့ ''ဘဝပင်လယ်၏လှိုင်းချက်အနိမ့်၊အမြင့်မညီညာမှုတွေကြားမှအလူးအလိမ့်ကူးခက်နေကြသော လူသားများ၏နှလုံးသွေးမှရင်ခတ်သံအစစ်အမှန်များကိုလည်းဘလော့ရွာထဲတွင်မြင်တွေ့နိုင်၏။''
လို့ဆိုထားတယ်ဗျာ..။ WOW ...။လေးစားစရာအံ့ဖွယ်ဘလော့ဂါတွေပါ။
ဘလော့ဂါဆိုသည်မှာဘလော့ရေးသူ....တနည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းများ၊နည်းပညာများ၊ ရသစာပေနှင့်သုတစာပေများ၊ဓမ္မစာပေနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်ကဏ္ဍများကို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီးမည်သည့်မျှော်လင့်ချက်များမပါရှိပဲမျှဝေနေကြသူများကိုခေါ်ပါသည်။
ဘလော့ဂါဆိုသည်မှာလောဘကြီးသူ....တနည်းအင်တာနက်ပေါ်မှနေ၍တကမ္ဘာလုံးကိုခြေလက်ခေါင်းမျက်လုံး အဆုံးရင်းနှီးပြီးအသိပညာများ(အကောင်းနှင့်အဆိုး)ကိုအချိန်ကုန်ခံရှာဖွေတင်ပြတတ်သူများကိုခေါ်ပါသည်။ (ကျနော်လိုအိယောင်ဝါးများမပါဝင်ပါ:D)
ဘလော့ဂါဆိုသည်မှာစေတနာရှိသူ....တနည်းခံစားချက်အထွေထွေကို Screen တွင်းသို့ Input Devices များသုံးကာအသွင်ပြောင်းကုန်ချောထုတ်လုတ်သူ တွေကိုခေါ်ပါသည်။ ထိုထုတ်လုပ်ပြီးသားကုန်ချောများကိုအခမဲ့ပြန်လည်သုံးစွဲခွင့်ပေးထားသောစေတနာရှင်အမျိုးမျိုးကိုလည်း ဘလော့ဂါများဟုသတ်မှတ်ရပါမည်။
(မှတ်ချက်........ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂင်းသူများကိုဆိုလိုသည်ဟုမှတ်ရန်..:P) စာဖတ်သူသက်သက်များကိုတော့ဘလော့ဂါဟုမခေါ်တွင်သောကြောင့်အနှီစာဖတ်သူများ နားလည်ပေးကြမယ်လို့ယူဆပါသည်။...တိန်။
*****အထူးသဖြင့် Blogger နှင့် Chatter ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိမြင်ရန်*****
ဘလော့ဂါဆိုတာ KFC ကြက်ကြော်သဖွယ်စားကောင်းသောအရာတစ်ခုပါ။ (ဒါကကိုယ့်ဆိုဒ်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့..:D)
ဘလော့ဂါဆိုတာ Shopping ထွက်ရင်းယူသွားတတ်တဲ့ (ဝယ်ထားသမျှတွေအကုန်လုံးထည့်လို့ရတဲ့)ကျော်ပိုးအိတ်လိုဟာမျိုးပါ..(ဆိုဒ်တကာဆိုဒ်တွေကသုံးမကုန်တဲ့
လို့ပြောရင်း အနှီ ''ဘလော့ဂါဆိုတာဘာလဲ?'' ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလက်စတုန်းအပြီးသတ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ..။
Sep 11, 2011, 3:43:00 AM
ဘလော့ဂါရဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ဖတ်သွားတယ်။ မရေးတတ်လို့သာပဲချင်းကလေးရေ။ ဂရုကြီးဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်း))
"ဘလော့ဂါဆိုတာ KFC ကြက်ကြော်သဖွယ်စားကောင်းသောအရာတစ်ခုပါ" ဆိုတာကို ဖတ်ပြီးပို့စ်တစ်ခုတင်တော့မယ်း))
Sep 11, 2011, 4:36:00 AM
Sep 11, 2011, 5:22:00 AM
ဘလော့ဂါဆိုတာ.. ဖတ်သွားပါတယ် ကိုချင်းလေးလည်း ဘလော့ဂ်ဂါ ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ..
ကျွန်တော်ဆို အဲလောက်ကို မရေးတက်ဘူးဗျ..
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်လေးတောင် တော်တော်ကျိုးစားအားထုတ် ရေးလိုက်ရတယ်.
Sep 11, 2011, 6:29:00 AM
ဘလော့ဂါဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို တခြားသူရေးထားတာတွေရော ကိုယ့်အမြင်တွေရော ရေးပေးသွားတာ... အရမ်းပြည့်စုံတယ်ဗျို့........... မအားတဲ့ကြားက ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်.. :D
Sep 11, 2011, 6:46:00 AM
Sep 11, 2011, 7:07:00 AM
ကိုချင်းရေ..ကျနော်လည်းပညံ လိုပဲ နိုးနိုးချင်းဖွင့်တာပဲ.. ညကအချိန်မသေသေးလို့ ..ဟဟ
မရေးတတ်လို့ သာတော်သေးတယ် ရေးထားတာများ..ဖလမ်းဖလမ်းထ..အရမ်းရမ်းလှနေပါလာ...အားလူးဘူးသီး..အာလူးဘူးသီး..ပြန်ပီ..ရထားရထား...မရဘူးလမ်းလျှောက်ပြန်ပီ
Sep 11, 2011, 7:52:00 AM
Sep 11, 2011, 7:54:00 AM
ဟွန့် ....မရေးတက်လို့သာပဲ ချင်းလေးကတော့လေ....ရေးများရေးတက်တယ် ဆိုရင်တော့လား.....ပြောကို မပြောချင်ဘူး.....ကဲ ..မပြောချင်ပါဘူးဆိုနေ.....ဟာ ...မပြောဘူးဆိုမှ ....ဟိဟိ နောက်တာ...:P:P
Sep 11, 2011, 8:22:00 AM
ဘလောဂ့်ဂါ ဆိုတာလေးကိုလာဖတ်သွားပါတယ် အားလုံးရေးကြတာတွေကောင်းပါတယ် အရောင်စုံ ပန်းခင်းထဲက မွှေးကြိုင်သင်းပျံ့ တဲ့ ပန်းလေး တွေ လိုပါဘဲ
Sep 11, 2011, 9:29:00 AM
ကိုချင်းရေ... ဖွင့်ဆိုချက်တွေများစွာထဲက သဘောအကျဆုံးဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်...ဘလော့ဂါဆိုတာ KFC လိုဆိုရင်တော့ တစ်ခုခု လိုနေသလိုပဲ...(အာလူးကြော်ပါ)
Sep 11, 2011, 1:04:00 PM
အမလေး ကိုချင်းတို့များ သူ့ကိုသူ ငချွတ်လေး ဘာလေးနဲ့ ပညာများတော့ စွန်းဝူခုန်းကျ နေတာပါ..
ရေးတက်လိုက်တာ တခါဖတ်ပြီး စုံစုံစိစိ ကို သိသွားတယ် ကောင်းပါ့ ကောင်းပါ့ ..အားပေးပါတယ် ငါ့အစ်ကိုရေ..
စီဘောက်မှာ ပြန်နှုတ်မဆက်တာ မဟုတ်ရပါဘူး ဗျာ .. ညာဘက်လက်တစ်ဖက်ကိုက်နေလို့ ညလေး နေ့ငို ညငို လုပ်နေရလို့ ပါ...ပြီးတော့ depressed ဖြစ်နေလို့ ရူးဖို့ နဲနဲပဲလိုတော့တယ် .
>>ကိုဇော်သိင်္ခရေ.တစ်ပါးသူကိုကိုယ်စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည်'မင်္ဂလာမည်၏'တဲ့. ကျနော့်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်အားပေးပြောဆိုပေးတဲ့အတွက်အစ်ကိုလည်းနေရာတ ကာပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ချည်းကြုံတွေ့ရပါစေဗျာ။ကျေးဇူးပါအစ်ကိုဇော်သိင်္ခ။
>>ကိုမောင်ရေ..လမ်းလျှောက်ပြန်ရလို့အားနာလိုက်တာဗျာ။ညကလည်းအရှိန်လွန် တယ်ဆိုပဲ..။ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ..ညီအလိုက်မသိသလိုဖြစ်သွားရင်..(ကိုကိုအာလူးကြီး) ကျေးဇူးပဲ။
Sep 11, 2011, 1:28:00 PM
Sep 11, 2011, 2:07:00 PM
စာက မနက်တည်းက ဖတ်တာ ကွန်မန့်ပေးလို့မရလို့ ညမှ ပေးရတယ်ဗျာ
ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ ဘလော့ တဂ်ပို့စ်တွေကို သေချာဖတ်ပြီး ကောင်းရာတွေ ပြန်ဖော်ပြပေးတာ ကောင်းတယ်ဗျာ
Sep 11, 2011, 2:21:00 PM
မောင်ချင်းလေးတို့များ ရေးတတ်လိုက်ထာနော်... တဖွဲ့တနွဲ့ အကိုးအကားတွေနဲ့ ရေးထားလိုက်တာ.. အမကို မင်းဧရာက တဂ်ထားတာအခုမှရေးဖို့စဉ်းစားတုံး။ ဟုတ်တယ် ငွေလမင်းပြောသလိုပဲ သိသလိုလိုနဲ့ မသိတဲ့အထဲမှာ အဲဒီဘလော့ဂါဆိုတာကြီးလဲပါတယ်း))
Sep 11, 2011, 3:44:00 PM
ဟွင်းဟွင်းဟွင်း အစ်ကိုချင်းရေးတာစောသွားတယ်။ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော် post တင်ပြီး Tag တော့မလို့။
ဝဲရီး ဂွတ်...Takk for Tag
Sep 11, 2011, 8:06:00 PM
>>ကိုဇာက်ပီ.ချစ်ကိုရေ..Ver Så God ပါဗျာ။
Sep 11, 2011, 11:07:00 PM
အလုပ်များနေလို့ အခုမှရောက်ဖြစ်တော့တယ် ချင်းကလေးရေ...ဘလော့ဂါကို ဖွင့်ဆိုပုံချင်းကွဲကြပေမယ့် ဘလော့ရွာကို ချစ်ကြပုံတွေချင်းကတော့ တူကြတာမို့ Rush Hour ထဲမှာ Chris Turker ပြောသလို brothers from another mother လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့...
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ..Brothers from another ဆိုတာလေးပြောခဲ့တော့ကျေးဇူးတင်လှပါရဲ့ဆရာ။နို့ပေ
December Mgmg Says:
Sep 13, 2011, 7:06:00 AM
အနော်လာဖတ်သွားတယ် အကိုကြီး :)
စာရေးဆရာတွေကိုး သီကုံးတတ်ကြလိုက်တာ အားတောင်ငယ်တယ် :)
ကိုချင်းရေ အရေးအသားကောင်းလှချည်လား။ kfc ဆိုတာလေးနဲ. ညွှန်းထားတာ ကြိုက်တယ်။ ကျနော်က kfc အရမ်းကြိုက်လို.လေ ဟဲ။ တစ်နေ.တစ်မျိုး
မရိုးနိုင်အောင် ရသအစုံစုံတင်နိုင်တဲ. ကိုချင်းကို လေးစားပါတယ်။ ရှေ.ဆက် တန်ဖိုး ရှိတဲ. ဘလော.ဂါ တစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။
ကျနော်. ဆိုဒ်လေး ဒိုမိန်းအသစ်နဲ. နည်းနည်းပြုပြင်ထားလို. စောင်.နေရတယ် ကိုချင်း။ နောက်3သုံးရက်မှ www.mgthuya.com ဆိုတဲ.ဒိုမိန်းနဲ.စသုံးလို.ရမှာဆိုတော. စာတွေရေးဖို. တင်ဖို. အားခဲထားလိုက်အုန်းမယ်။
Sep 17, 2011, 10:36:00 PM
ဟဲဟဲ ကေအက်ဖ်စီဆိုရင် ဆော့စ်လေးနဲ့ မှ ကြိုက်တာဗျ.. ခေါင်းဖြူကြီးကိုပြေးမြင်ပါရဲ့ဗျာ.. ဒါပေမယ့် သူကတော့ ဘလော့မဂင်းလိုက်နိုင်ဘူးဗျ... ဟီးဟီး... စာရေးတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ... အချိန်ပေးပြီး လိုက်ဖတ်.. အချိန်ပေးရေးထားမှန်းသိသာပါတယ်....